आफ्नै निर्देशन ‘कुल्चँदै’ गृहमन्त्री - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
आफ्नै निर्देशन ‘कुल्चँदै’ गृहमन्त्री
काठमाडौं । ‘सुरक्षा निकाय चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो । प्रचारबाजी गर्ने, वक्तव्यबाजी गर्ने र अनावश्यक अन्तर्वार्ता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुस्,’ पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशन हो यो।
सुरक्षा निकायलाई कमान्डमा राख्ने नेतृत्व पाएका शर्मा आफैँ भने आफ्ना दैनिक गतिविधि ट्विटर र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिहाल्छन्।
सुरक्षाजस्तो संवेदनशील निकायको कमान्ड सम्हालेका मन्त्री शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदाजस्तै ‘सस्तो प्रचार’ रुचाउने गरेको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा रहेका अन्य मन्त्रीभन्दा उनी अलि बढी नै सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त देखिएका खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ।
मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायबीच भएको गोप्य बैठकका विषयसमेत मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेका छन् । गत जेठ २४ गते पदबहाली गरेका उनले नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना निर्माण र ८४ बुँदे कार्ययोजनाबारे भएको छलफलबारे फेसबुकमा भिडियोसहित पोस्ट गरे । त्यति मात्रै होइन, डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको कुरासमेत उनले फेसबुकबाटै सार्वजनिक गरिदिए । जबकि प्रहरीको आन्तरिक कारबाही अति गोप्य मानिन्छ।
मुद्दा-मामिलामा गएपछि अदालतबाट मात्रै दोषी ठहर्ने व्यवस्थाविपरीत शर्माले ‘निलम्बन गर्न’ दिएको निर्देशन सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । डीएसपी शर्माको निलम्बन भने तत्कालका लागि टरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गर्ने निर्णय अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
गृहमन्त्री शर्माले दैनिकजसो आफू सहभागी भएको बैठक, छलफल एवं कार्यक्रमका गतिविधि ट्विटर र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । गत बिहीबार मात्रै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा ठगिएका र दुःख पाएका युवायुवतीको समस्या समाधान गर्न प्रहरीको स्पेसल फोर्स बनाएर परिचालन गर्ने’ कुरा शर्माले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । म्यानपावर दलालहरूको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेकाले प्रहरीले धेरै गोप्य तवरबाट अनुसन्धान एवं खोजतलास गर्दै आएको छ ।
नेतृत्व पदमा बसेका मन्त्रीले प्रहरीको स्पेसल फोर्स बनाउने विषय सार्वजनिक गरेपछि म्यानपावर दलालले भाग्ने अवसर पाउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘स्पेसल फोर्स बनाइसकेपछि सार्वजनिक गर्नु ठीक होला तर गोप्य रणनीति मन्त्री आफैंले बाहिर ल्याउनु राम्रो होइन’, एक प्रहरी अधिकृतले भने।
भीआईपीहरूको बैठकलाई सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले ‘अति गोप्य’ मानिन्छ । तर सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कुरा पनि शर्मा आफैंले सार्वजनिक गरे । उनले आफू उपस्थित केही बैठकबारे त फेसबुकमार्फत ‘लाइभ’ नै गरेका छन्।
प्रहरीलाई आफ्नै ढंगले चलाएको आरोप पनि मन्त्री शर्मामाथि लाग्न थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दोस्रो चरण स्थानीय तहको चुनावमा दाङको तुल्सीपुरस्थित प्रतापकोट अम्बास मतदान केन्द्रमा बम फाल्ने तत्कालीन हवल्दार (हाल असई) दुर्गाबहादुर रानालाई उनकै निर्देशनमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ‘ढोके’ बनाइएको छ । प्रारम्भमा एक तह बढुवा गरी ‘कामको उच्च मूल्यांकन’ गरिए पनि रानालाई ढोकेको जिम्मेवारी दिनु जायज नभएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
‘प्रहरी संगठनको कर्मचारी कता परिचालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी संगठन नेतृत्वलाई हुन्छ, मन्त्रीले मन लाग्यो भन्दैमा जता पनि परिचालन गर्न पाउँदैनन्’, मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘रानालाई परराष्ट्रमन्त्रीको ढोकामा उभ्याउनुभन्दा अरू नै जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो।’
गृहमन्त्री शर्माले आफ्ना ८४ बुँदे कार्ययोजनामा समावेश गरेका केही बुँदा ‘डेटलाइन’ घर्किनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । दुई महिनाभित्र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, प्राकृतिक स्रोत-साधनको संरक्षण गर्न, विकास-निमार्णका काममा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गर्न, सेवा प्रभाहमा सुधार ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याउने उल्लेख छ । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि कार्ययोजनाको ड्राफ्टसम्म तयार भएको छैन।
‘गृहमन्त्रीको काम नयाँ कार्ययोजना एवं रणनीति ल्याउने र त्यसलाई पूर्णता दिन मातहत निकायलाई निर्देशन दिने हो तर सुरक्षा निकायलाई आफूखुसी सञ्चालन गर्नु होइन’, मन्त्रालयकै एक अधिकृत भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूको गतिविधि हामी पनि उहाँकै फेसबुकबाट धेरै थाहा पाउँछौं ।’ गृहमन्त्रीको कार्ययोजनाको २१ नम्बर बुँदामा जनगुनासो सुन्न ‘टोल फ्री’ नम्बर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई भने उनले कार्यान्वयन गरेका छन् । उनले असार २६ गते टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
पटक-पटकको प्रयासपछि सम्पर्कमा आएका मन्त्री शर्माले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई नै आफूले सार्वजनिक गरेको बताए । ‘डीएसपी सञ्जीव शर्मालाई निलम्बन गर्न आदेश दिएको विषय सम्बन्धित च्यानलबाट नआएपछि सबैमा जानकारी होस् भनेर फेसबुकमा राखेको हुँ’, उनले भने, ‘विधिसंगत ढंगले कारबाही गर भन्नु मेरो जिम्मेवारी हो । यसले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।’
‘प्रहरी संगठनमा बढी हाबी देखिएको र प्रहरी प्रमुखकै कुरा नसुनेको’ जिज्ञासामा शर्माले त्यो मिथ्या आरोप मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘म कसरी प्रहरी संगठनमा हाबी भएँ ? तपाईंलाई कसले सुनायो ? त्यो गलत कुरा हो । मनगढन्ते कुराको पछि म लाग्दिनँ ।’ शर्माले हालै भएको प्रहरी बढुवामा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको प्रस्टीकरणसमेत दिए।